के हो मनी एजुकेशन ? – जागरण अनलाइन
के हो मनी एजुकेशन ?
२०७५ चैत्र २६, मंगलवार १९:५८ मा प्रकाशित
सधै अभिभावक आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा दिने कोशिश गरीरहेका हुन्छौ तर जानी वा नजानी महत्तवपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको हुन्छौ त्यो हो ‘मनी’ एजुकेशन ।
मनी एजुकेशन मतलब पैसाको बचन मात्र सिकाउने होइन की पैसालाई सहि तरिकाले खर्च गर्न वा हिसाव किताब गर्न सिकाउनु पनि हो । सहि उमेरमा सहि मनी एजुकेशनले तपाईको बच्चाको भबिष्यलाई उज्जवल बनाउन सक्छ त्यसैले केही भनी एजुकेशन र त्यसँग जोडिएको सान्दर्भिक कुराहरू
मनी एजुकेशन भनेको मनी मेनेजमेन्ट जसमा बच्चालाई बचत गराउन साथै खर्च गर्न र लेन देन हिसाब किताब आदिको पुरै जानकारी दिने गरिन्छ ।यस क्षेत्रका विज्ञका अनुसार अहिलेको जेनेरेशनका साथमा पुरानो जेनेरेशनको तुलनामा खर्च गर्नका लागि धेरै बहाना मा पैसा नै पर्छ ।यदि बाल्यकालदेखि नै मनी एजुकेशन सँग जोडिएका बिषयमा सहि जानकारी दिन सकियो भने ऊ जवान भएपनि उसको लागि भनी मेनेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ ।नत्र धेरै जसो बच्चाहरु जस्तै बैकको साधारण फारम भर्नका लागि पनि अरूको सहयोग लिनुपर्दछ ।
बच्चालाई पैसाको वारेमा सम्झाउनु सिकाउनु अभिभावकको जिम्मेवारी पनि हो । बच्चाले यो जान्न आवश्यक छ कि उसलाई खर्चका लागि पैसा कमाउन आवश्यक हुन्छ । जीवनमा हरेक चिज सजिलै पाँइदैन। कुनै पसलमा गएर बच्चाले खेलौनाको लागि जिद्घी ग¥यो भने त्यो आफै पाइदैन । त्यसका लागि अभिभावकले पैसा दिनुपर्छ । त्यो पैसा आफै पाइदैन त्यसका लागि अभिभावकले गरेको मेहनत को कमाई दिनुपर्छ । बच्चाहरूको चाहाना पूरा गर्नु र उसकोे जिद्घी पूरा गर्नु दुईवटा फरक कुरा हुन जुन अभिभावकले बुझ्नुपर्छ।
केही उपायहरू र कसरी गर्न सुरूवात ?
आफ्नो बच्चालाई त्यही दिनबाट पैसाको बारेमा बताउन सुरू गर्नुहोस् जुन दिनदेखी उसले जोड घटाउन सुरू गर्न थाल्छ। प्राय २ वर्षको उमेरमा नै बच्चाले पैसा चिन्न थाल्छन् ।मोवाइल,रिमोट कन्ट्रोल जस्तै पैसालाई पनि जरूरी सम्झन थाल्दछन र पैसा पाउने कोशिश गर्दछन् । यो उमेरमा कथा या खेलको माध्यमबाट उनीहरूलाई पैसाको बारेमा बताउनुपर्दछ ।
पैसाको वचन एक जरूरी संस्कार हो र मितव्ययीता एउटा आदत। जुन आफ्नो बच्चामा बाल्यकालदेखि नै बानी बसाउनुपर्दछ ।
खेलौना जस्तै पैसा जम्मा गर्नु पनि बच्चाको रहर हुन्छ, त्यसैले उसलाई पैसा राख्नका लागि खुत्रुके ल्याएर दिनुहोस् ताकी उसले पैसाको वचत सिक्न सकोस् ।
उमेरको साथ साथमा बच्चाको डिमाण्ड पनि बढ्न थाल्छ। उनीहरूको बढ्दो आवश्यकता लाई पूरा गर्न पर्याप्त पकेट मनी र उसको खर्चमा नजर राख्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हो । यदि तपाईको बच्चाले राम्रोसँग पैसा जम्मा गरेको छ भने उसलाई कुनै उपहार दिनुहोस्। उसले गर्दा बच्चा बचतको लागि प्रोत्साहित हुन्छ र धेरै पैसा वचत गर्न कोशिश गर्छ ।
प्रायः बच्चाहरू कुनै चिजलाई लिएर जिद्घी गर्न थाल्दछन । जुन सहि होइन।यस्तो अभिभावकले उसलाई सम्झाउनुपर्दछ कि उसको माग कति सहि हो र कति गलत तर फैसला चाहिँ उसैमा छोड्नुपर्दछ ।
बच्चालाई हरेक आवश्यकता हेरेर निश्चित धनराशी दिनुहोस् र वजारमा उपलब्ध विकल्प र समस्याहरूको वारेमा पनि बताउनुहोस् । बच्चालाई आवश्यक बस्तु र बिलासिताका बस्तुका बारेमा फरक वताउनुहोस् ।बरू उसलाई सम्झाउनुहोस् कि हरेक कुरालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिता दिनुपर्छ। वच्चालाई कहिलेकाही आफ्नो काम गर्न ठाउँ वा अफिसमा लग्नुहोस्। जहाँ उसले आफ्नो अभिभावलके काम गरेको देख्छ र पैसा कहाँबाट आउछ र कति मिहनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्नसकोस् ।
वच्चामा चेरीटीको भावनाको विकास गराउनुहोस्। कुनै राम्रो कामका लागि उसको हातबाट पैसा दिनुहोस्,ताकि दिने भावनाको पनि जागृत होस् ।
प्रहरी कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासनमा इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थीको अभाबको महशुस गर्न नपरोस २०७५ चैत्र २६, मंगलवार १९:५८
कमलको तारिफ गर्दा किचड रिसाउला २०७५ चैत्र २६, मंगलवार १९:५८
विप्रेषण गरिवि निवारणका लागी २०७५ चैत्र २६, मंगलवार १९:५८